Global Voices teny Malagasy » Myanmar: Sary sy rohy famintinana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Jolay 2018 3:37 GMT 1	 · Mpanoratra May Hnin Phyu Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsinanana, Myanmar (Birmania), Mediam-bahoaka, Saripika, Vaovao Mafana, Zavakanto & Kolontsaina
Ity sary ity dia avy amin'ny bilaogy fifty viss izay nandefasan'ilay bilaogera Aung Kyaw ny fanangonany ny takelaby  sy ny afisy hita manerana ny firenena.
Nandefa ny sarin'ny tondradrano sy ny fahasimbana vokatr'izany nanerana ny tanàndehiben'i Yangon  taorian'ny oram-batravatra andro vitsy lasa ilay bilaogera Barnyar. Nanamarika ihany koa i  May11  fa avy foana ny orana nanomboka hatramin'ny 30 Aprily ka hatramin'ny 4 Mey ary nisy mihitsy aza ny vaovao momba ny mety hisian'ny rivodoza hahatratra ilay tanàndehibe.
Nanoratra tononkalo  mifandraika amin'ny orana sy ny malalany any alavi-tany i Mr.Pooh.
Nampitahain'i Kothurein  ny orana niainany fahazaza sy ny orana hitany amin'izao fotoana .
Nanerana izao tontolo izao , nandefa ny sarin'ny diany nankany amin'ny Mozea Britanika  i Bluegyi izay nahitany ny asatanana tranainy avy any Birmania.
Tsara ihany koa ny mamaky momba ny asan'i Gyittu amin'ny maha-injeniera azy  sy ny antony nisafidianany hanao izany.
Ary faranako miaraka amin'ireo sary avy amin'ny May11 mikasika ny Fetiben'ny Shwe Dagon Pagoda Kason  ny herinandro .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/07/21/123340/
 fanangonany ny takelaby: http://viss.wordpress.com/2007/05/06/love-thy-motherland-and-the-like/
 Fifty Viss: http://viss.wordpress.com
 tondradrano sy ny fahasimbana vokatr'izany nanerana ny tanàndehiben'i Yangon: http://barnyarbarnyar.blogspot.com/2007/05/blog-post_06.html
 Nanamarika ihany koa i: http://emotionalcorner.blogspot.com/2007/05/blog-post_05.html#links
 Nanoratra tononkalo: http://myanmaroa6.blogspot.com/2007/05/blog-%20%20post.html
 diany nankany amin'ny Mozea Britanika: http://bluegyi.blogspot.com/2007/05/british-museum.html
 ny asan'i Gyittu amin'ny maha-injeniera azy: http://gyittu.blogspot.com/2007/05/as-i-have-aged.html
 Shwe Dagon Pagoda Kason: http://emotionalcorner.blogspot.com/2007/05/blog-post.html